Nidoboka eny Antanimora: kameroney tratra nanao vola sandoka | NewsMada
Nidoboka eny Antanimora: kameroney tratra nanao vola sandoka
Par Taratra sur 25/07/2019
Nidoboka avy hatrany eny amin’ny fonjan’Antanimora rehefa avy natolotra ny fampanoavana ireo roa lahy malaza ratsy amin’ny fanamboarana vola sandoka (teratany Kameroney ny iray). Teny amin’ny hotely iray eny Andohatapenaka izy ireo no tratran’ny polisy, ny alakamisy lasa teo…
Malaza ratsy amin’ny fanamboarana vola sandoka sy fisolokiana avo lenta izy roa lahy tratran’ny polisy tao amin’ny hotely teny Andohatapenaka ireto. Raha ny tatitra nampitain’ny polisy, lehilahy iray milaza fa hoe mahay manamboatra vola sandoka ka mitady olona izay mila izany vola izany. Safidiany ireo olona hanaovan’izy ireo ny asa ratsiny ka ireny mpanao “bizina” ireny no tena hiresahany. Milaza amin’ilay olona solokiany izy fa raha manome vola 3 tapitrisa Ar azy ilay olona dia omeny vola sandoka 9 tapitrisa Ar ary mody mitondra vola sandoka 20 000 Ar mihitsy izy entiny hisolokiany olona amin’izay toerana halehany. Nahazo loharanom-baovao avy hatrany ny teo anivon’ny polisy miasa ao amin’ny CSP7 ka nametraka ny paikady rehetra hahafahana misambotra ity olona ity.
Nahitana taratasy mitovy habe amin’ny vola tena izy…
Fantatra nandritra ny fanadihadiana nataon’ny polisy hatrany fa mivahiny amina hotely iray eny amin’ny faritra Andohatapenaka ity lehilahy ity ka nidina teny an-toerana avy hatrany ny polisy. Noraisim-potsiny tao amin’ilay efitrano iray ao amin’ity hotely ity ilay lehilahy miaraka amin’ny fitaovana samihafa nolazainy fa fanamboaran’izy ireo vola sandoka, toy ny taratasy sy ny tavoahangy maro samihafa feno ranomainty tsy fantatra mazava. Nandritra ny famotorana nataon’ny polisy azy no nilazany fa misy lehilahy iray hafa teratany kameroney manampy azy misoloky olona amin’ity resaka vola sandoka ity sady miara-manamboatra vola sandoka aminy. Tra-tehaky ny polisy tsy lavitra ilay hotely ihany koa ity teratany kameroney ity rehefa tafiditra tao anaty vela-pandriky ny polisy. Niaiky ry zalahy ireo nanditra ny famotorana nataon’ny polisy fa miara-miasa ary tsy vao izao fa efa ela no nanao ity asa fanaovana vola sandoka sy fisolokiana olona ity. Natolotra ny fampanoavana izy ireo ka naiditra am-ponja vonjimaika.